खेल को दरबार (कीव), जो तल हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो, यो मनपर्ने स्थानहरूको युक्रेन को मानिसहरूले मात्र होइन भ्रमण छ आफ्नो अतिथिहरूको पनि एक, तर छ। कीव, आकर्षण दुवै ऐतिहासिक र समकालीन धेरै मा। यो भवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल पर्छ।
आज यो सुविधा आफ्नो उपस्थिति को एक, तर पनि उच्च प्रविधी नवाचारै को उपस्थिति द्वारा मात्र होइन, एक बहु-स्तर जटिल छ। यो संरचना वर्षौंदेखि उपस्थिति परिवर्तन र अब यो जटिल मा हेर्न पूर्ण परिष्कृत र सुन्दर छ।
खेल महल कीव मा - शहर को "हृदय" छ। भवन Cherepanova हिल को खुट्टा मा स्थित छ। यो जटिल 1960 द्वारा, शहर तँकोरों ऐ बनाइएको थियो Zavarov, एमआई Grechina र ईन्जिनियरहरु एस Chudnovskii, छठी Repyah। को लास संरचना एक उत्पादन प्रबलित ठोस बनेको छ। सुविधा वर्ग मीटर बारेमा दुई सय हजार एक षड्यन्त्र मा,4फर्श को एक उचाइ मा बनाइएको थियो। कीव खेल दरबारमा आधिकारिक सार्वजनिक 12.09.1960 गर्न खोलिएको थियो।
यसको रंगशालामा प्रतियोगिताहरु, च्याम्पियनशिप आयोजित; यसको बारेमा 12 हजार मान्छे छन्। त्यसपछि, संस्थापक बीस वर्ष पछि भवन पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरे। स्थापित नयाँ प्रकाश र प्राविधिक उपकरण, यसलाई पूर्ण लबी, अतिथि र सदस्यहरू शौचालय निर्माण र क्याफे लागि ठाउँ सिर्जना गर्न कायापलट भएको छ। खेल केन्द्र 2004 र 2005 मा थप दर्शकहरूलाई अटाउन सक्थे, एक परिमार्जन गरिएको थियो। अन्त मा राम्रो र फराकिलो खेल को कीव महल गर्यो, गाउँलेहरू उसलाई हेर्न र पनि प्रतियोगिताहरु मा भाग लिन सबैलाई निमन्त्रणा। वर्षौंदेखि परिसर बारम्बार व्यापार मेला, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताहरु र च्याम्पियनशिप आयोजित भएको छ। कम्तिमा पाँच हजार चाड संगीत, पचास प्रतियोगिताहरु, सेमिनार र सम्मेलन, बरफ प्रदर्शन बारेमा, त्यहाँ पारित गरेको छ। तिनीहरूले यस्तो Dzhennifer Lopes, क्रिस्टिना Aguilera, Britni Spirs, द Rasmus, ATB, Prodigy र धेरै अन्य लोकप्रिय गायक र समूहहरू थिए। यहाँ, 2005 मा, हामी एक प्रमुख सांगीतिक प्रतियोगिता "Eurovision" सिर्जना को विचार कार्यान्वयन र चाँडै एक बच्चा-जस्तो प्रतियोगिता थियो।
2011 को वसन्त मा हामी परिसर को6महिना को छोटो अन्तराल पछि खोल्ने चिनो एक समारोह आयोजित। रंगशालामा र लकर कोठा मर्मत को निराशाजनक आवश्यकता थिए, र त्यो गरेको थियो। साथ, नयाँ सिट स्थापित थिए, जो एक मोडेल घन जस्तै छ जो राष्ट्रिय झण्डा को रंग र अद्यावधिक इलेक्ट्रोनिक scoreboard, मा चित्रित छन्। यो खेल प्रतियोगिताहरू र रंगशालामा मा स्थान लिइरहेको प्रदर्शन को एक किसिम प्रदर्शन गर्न सक्ने धेरै प्लाज्मा प्रदर्शित जोडिएको छ। आज आगंतुकों थप सुविधाजनक भए, किनभने अब तिनीहरूले अधिकतम खुशी र आनन्द प्राप्त, खेल को महल मा त्यहाँ आए। फोटो हल सबै यो शोभा अंश मात्र conveys।
को विशेष चासो एक अद्वितीय सृष्टि हो जो रंगशालामा दृश्य, योग्य हुनुहुन्छ। सबै अतिथि साथै खडा विभिन्न भागहरु मा कुनै पनि कार्य देखेको छन्। त्यहाँ rehearsals, नेपथ्य, जहाँ मुख्य हल लागि ठूलो स्थल हो। को closets मात्र वर्षा छैन र शौचालय, तर पनि मालिश टेबल, दराज स्थापित छन्। हालै कठिनाई बिना सहज लाउने कोठा परिवर्तन। आवश्यक छ भने, तपाईं ऐना रचनाहरू र विशेष फर्नीचर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। मा कीव मा खेल महल, विभिन्न विषयहरुलाई मा प्रदर्शनियों र घोडे कुनै संगीत तालिका र च्याम्पियनशिप छन् जहाँ2भन्दा बढी फर्श, आयोजना गरिन्छ। एघार गलियारों संग केन्द्रिय गेट - यो पहिलो तल्ला छ।
साथै, त्यहाँ लगभग हजार दस मान्छे को लागि खानपानको प्रबन्ध गर्नु जो वीआईपी-व्यक्ति र लकर कोठा, धेरै आदानों छन्। अतिथिहरूको विद्युतीय टिकट को खेल जटिल आयोजना गरिन्छ - यो एक नयाँ नियन्त्रण प्रणाली छ। यो आविष्कार जो दर्शकहरु को सही संख्या गणना गर्न सम्भव छ, धेरै राम्रो छ। एक तल्ला उच्च रंगशालामा विभिन्न ठाउँमा बारेमा छ आदानों र अधिक पन्ध्र रेस्टुरेन्ट छ। यसबाहेक, Palais des खेल व्यापार मेला अक्सर कीव मा आयोजित गरिन्छ।
स्टेडियम को जग दिन देखि पचास वर्ष थियो। अतिथि सय तीन भन्दा बढी प्रदर्शनियों हेर्न सक्षम हुनेछ जहाँ इतिहास, को एक संग्रहालय त्यहाँ खोलिएको थियो। ती सबै आफ्नो शुरूआत देखि खेल को महल को इतिहास मा समय र गोता फिर्ता उत्प्रेरित गर्नेछ। तर मात्र प्रदर्शन ती वर्ष को सम्झनाहरु राख्न मदत, संग्रहालय फोटो धेरै लटकी। यहाँ तपाईँले योजनाहरू पूरै निर्माण प्रक्रिया झल्काउने योजना को एक किसिम देख्न सक्छौं। साथै, यहाँ संकलित छन् विभिन्न पुरस्कार र ट्राफियों को च्याम्पियनशिप र प्रतियोगिताहरु मा जित्यो। वर्ष, सबैका लागि अध्ययन र सन्दर्भ लागि हाल उपलब्ध छन् जसको लागि एक कलेक्टर स्मरणीय मा कर्मचारी।
धेरै वर्ष को लागि यो अपडेट, खेल जटिल र राम्रो लागि परिवर्तन प्राय धेरै उत्पादन। यो unnoticed गएको र दर्शक साइट छैन। प्रशासन भवन सबै आगंतुकों लागि सबैभन्दा सहज वातावरण सिर्जना गर्न दिइएको यस क्षेत्रमा, साथै लागि सहभागीहरू kultmeropriyaty रूपमा चाल। को प्रतियोगिताहरु, चाड संगीत, प्रदर्शन, कार्यक्रम, यो सबै खेल महल मा गर्न सकिन्छ। हल परियोजना एउटा उत्कृष्ट विवरणका साथ विभिन्न स्थानबाट यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ। दर्शकहरूले मञ्चमा हुनेछ भनी कुनै एक कार्य देखि पर्ची छैन।
खेल को दरबार (कीव): उचित
हालै, संग 05 मा 13 जुन "बगैचा उचित" प्रकाश उद्योग र संग्रह को उचित भएको थियो। त्यहाँ प्रस्तुत सामान, वसन्त लुगा र जुत्ता, साथै "बगैचा उचित" को दुई संग्रह गरिएको छ। कार्यक्रम मा, आगंतुकों बगैचा, तरकारी बीउ, लन घाँस, स्प्राउट्स, बिरुवा र थप काम को लागि विशेष उपकरण किन्न सकिएन।
जिप कोड: 01601. ठेगाना: युक्रेन कीव, सडक खेल क्षेत्र, 1।
जिल्ला खेलकुद महल कीव मा - Pechersk। फोन: +38 (044) 246 74 05।
छुट्टी गाउँ "नेप्च्युन" (ठूलो ढुङ्गा / Primor): सेवाहरू, मूल्यहरू, फोटो र समीक्षा
मास्को - टोरन्टो (समय फरक): उडानहरू मा समीक्षा र सिफारिसहरू compatriots
चार्ज लागि अभ्यास कसरी गर्न
को Baptists को हुन्? आफ्नो शिक्षक
आफ्नो हातले cinder ब्लक चिनाई: एक प्रौद्योगिकी समाधान
मानिसहरूलाई मा उपचर्म परजीवी
पुष्पांजलि संग Hairstyles - बिस्तारै र सुन्दर
सपना व्याख्या हेर। दाँत सपनामा बाहिर गिर? यो सधैं एक misfortune छ।